Zvigadzirwa zvinoshandiswa zvakanyanya mumaindasitiri ekurapa uye emotokari Isu tinoona mhando sehupenyu, kuitira kuti tive nechokwadi, tinomisa maitiro gumi nematanhatu ekuongorora, uye tinogara tichivandudza nekuvandudza maitiro mune inotevera nhanho, kuti tive nechokwadi chekuti tinogona kukupa yakakwirira. -Zvikamu zvemhando, kuitira kuti hupenyu hwako hwemidziyo huve hwakareba uye chiyero chakakodzera chive chakakwira. 7 * 24-awa yepamhepo yevatengi sevhisi kwauri, chero kusagutsikana kunogamuchirwa kuisa pamberi nesu chero nguva, isu tinopa cons...
High precision zvikamu kugadzirisa
Chiyero chemuchina chekuyera chemhando yepamusoro-chaiyo chikamu chechigadzirwa ndecheyeye isiri-yekubata, iyo isingangodzivise kukuvadzwa kwechinhu chakayerwa, asi zvakare kuchinjika kune isingabatanidzi mamiriro echinhu chakayerwa, senge tembiricha yakanyanya, kudzvanywa kwakanyanya. , mvura, nharaunda ine ngozi uye zvichingodaro. Yakanyanya kurongeka machining mafudzi basa rakakosha rekutsigira kufambira mberi kwesainzi nyowani uye tekinoroji, uye kudiwa kwekudzivirira kwenyika hurongwa hwekusimudzira uye kukwezva ...
Muchina wekugaya unonyanya kureva chishandiso chemuchina chinogadzirisa nzvimbo dzakasiyana-siyana dzebasa rine chigayo chekucheka. Kazhinji, chigayo chekucheka chinonyanya kutenderera, uye kufamba kwechigayo uye chekucheka chiri mukudya. Inogona kugadzirisa ndege, groove, zvakare inogona kugadzirisa marudzi ese enzvimbo yakakombama, giya uye zvichingodaro. Muchina wekugaya imhando yemuchina wekushandisa wekugaya workpiece ine milling cutter. Kuwedzera kune ndege yekugaya, groove, mazino egiya, shinda uye spline shaft, muchina wekugaya ...
Zvigadzirwa Zvinotsanangurwa Zvibereko zvechigadzirwa: hapana burr, batch kumberi, kushata kwepamusoro kunopfuura ISO, yakakwira chaiyo Chigadzirwa zita: Precision lathe machining zvikamu Chigadzirwa: CNC lathe processing Chigadzirwa zvinhu: 304, 316 simbi isina tsvina, mhangura, simbi, aluminium, nezvimwe zvinhu. maitiro: yakanaka corrosion resistance, kupisa kupisa, kuderera kwekushisa simba uye mechanical properties. Chigadzirwa chekushandisa: chinoshandiswa mumidziyo yekurapa, midziyo yemuchadenga, midziyo yekutaurirana, mota indu ...
Muchina wekugaya unoreva chishandiso chemuchina icho chinonyanya kushandisa chigayo chekucheka kugadzirisa nzvimbo dzakasiyana pane yebasa. Kazhinji, chigayo chekucheka chinonyanya kutenderera, uye kufamba kwechigayo (uye) chigayo chekucheka ndiko kufamba kwekudya. Inogona kugadzirisa ndege, groove, pamusoro, giya uye zvichingodaro. Milling muchina chishandiso chemuchina chinoshandisa milling cutter kune milling workpiece. Kunze kwendege yekugaya, groove, zino, shinda uye spline shaft, muchina wekugaya unogona zvakare kugadzirisa zvakanyanya kuomarara chimiro, ...
Iko kurongeka uye kukanganisa kwezvikamu zvekugadzirisa ndiwo mazwi ekuongorora iwo geometric paramita ye machining pamusoro. Kuyera kwechokwadi kunotora giredhi rekushivirira, iyo giredhi diki, iyo yakakwira chaiyo, yakakura kukosha, uye kukanganisa kukuru. Machining, kukanganisa kukanganisa kuduku, pane zvinopesana, iyo chaiyo maparameter anowanikwa nekugadzirisa nzira hairevi kuti yakarurama. Kubva pakushanda kwezvikamu, chero bedzi kukanganisa kwekugadzira kwe Hardware mold zvikamu zviri mukati ...
1、Kushanda kwechamfering Basa rakazara rechamfering kubvisa burr uye kuita kuti rinake. Asi kune iyo chamfering yakanyatso kuratidzwa mudhirowa, kazhinji ndicho chinodiwa chekuisa maitiro, senge yekumisikidza gwara rekubereka, uye imwe arc chamfering (kana arc shanduko) inogona zvakare kuderedza kushushikana kwekushushikana uye kusimbisa simba reshaft zvikamu! Mukuwedzera, gungano iri nyore, kazhinji kusati kwapera kugadzirisa. Muzvikamu zvemichina yekurima, e...
Tekinoroji Parameter Chigadzirwa Zita: Mota inotakura Chigadzirwa maitiro: CNC lathe Chigadzirwa zvinhu: ndarira Zvishandiso zvivakwa: Iine simba rakawanda uye kusagadzikana kwekuora Kushandiswa kwechigadzirwa Chinoshandiswa muinjini neyemugungwa indasitiri, pamwe nezvikamu zvezvimiro zvinoda corrosion kuramba, senge giya, giya rehonye. , bushing, shaft, etc. Proofing cycle: 3-5 mazuva Kukwanisa kwezuva nezuva: zviuru zvitatu Maitiro ekugadzirisa: Zvinoenderana nevatengi kudhirowa zvinodiwa kugadzirisa Zita reBrand: Tungamira hor...
Maitiro ekugadzirisa zvikamu ane zvakanyanya kuomarara zvinodiwa. Kusangwarira kushoma mukugadzirisa kuchaita kuti kukanganisa kwechishandiso chipfuure chiyero chekushivirira, chinoda kugadziridzwa, kana kuzivisa iyo isina chinhu, iyo inowedzera mutengo wekugadzira. Naizvozvo, ndezvipi zvinodikanwa zvekugadzirisa zvikamu zvinogona kutibatsira kuvandudza kugadzirwa kwakanaka. Chechipiri, zvinodiwa zvemidziyo, hutsinye uye yakanaka kugadzirisa kunofanirwa kuitwa nemidziyo yekuita kwakasiyana. Kubva...
Muchina wekugaya unonyanya kureva chishandiso chemuchina chinoshandisa milling cutters kugadzirisa nzvimbo dzakasiyana dzebasa. Kazhinji, chigayo chekucheka chinonyanya kutenderedzwa, uye kufamba kwechigayo uye chigayo chekucheka ndiko kufamba kwekudya. Inogona kugadzirisa ndege nemagrooves, pamwe nenzvimbo dzakasiyana dzakakombama uye magiya. Milling muchina chishandiso chemuchina wekugaya workpieces ine milling cutters.